अन्तरिक्ष युगको नयाँ प्रभात | साहित्यपोस्ट
द इकोनमिस्ट प्रकाशित २ श्रावण २०७८ ००:०१
गएको साता बेलायती खर्बपति रिचर्ड ब्रान्सन अन्तरिक्ष पर्यटनमा निस्किए । उनको अन्तरिक्ष पर्यटन गराउने कम्पनी भर्जिन ग्यालेक्टिकको विमानबाट उनी र उनका केही सहयोगीसहित पृथ्वीभन्दा माथि ८६ किलोमिटरमा पुगेर शून्य गुरुत्वाकर्षणको अनुभव गरी फर्किए ।
यस्तो पर्यटनमा अन्य चार अर्बपतिहरु पनि लागिपरिरहेका छन् । तीमध्ये अमाजन डटकमका मालिक जेफ बेजोस अर्को साता यसरी नै अन्तरिक्ष यात्रामा निस्कने तयारीमा छन् । त्यसैगरी, टेस्ला मोटर कम्पनीका मालिक इलन मस्क पनि अन्तरिक्ष यात्राको तयारीमा छन् ।
रिचर्ड अमेरिकाको न्यु मेक्सिकोको मरुभूमिमा रहेको अन्तरिक्ष विमानस्थलबाट भर्जिन ग्यालेक्टिकको युनिटी २२ रकेटमार्फत अन्तरिक्षमा पुगेका हुन् । उनले एक घण्टा जति अन्तरिक्षमा समय बिताएका थिए । वैज्ञानिकहरुका अनुसार पृथ्वीको सतहबाट ८० किलोमिटरमाथि पुगेपछि त्यो अन्तरिक्ष हुनेछ । जहाँ कुनै पनि किसिमको गुरुत्वाकर्षणको अनुभव हुँदैन । मान्छे उडेको महसुस गर्न थाल्छ ।
विमानमा दुई चालक दलका सदस्य र रिचर्डका अन्य तीन जना साथीहरु थिए ।
यो यात्रालाई अझ सहज बनाउन अझै केही समय लाग्छ तर पनि यो परिक्षण यात्रा आफ्ना लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको रिचर्डले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले एक भिडियो प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘तपाईंहरु सबैलाई नयाँ अन्तरिक्ष युगमा स्वागत छ ।’
परिक्षणपछि के हुन्छ ?
भर्जिन ग्यालेक्टिकले अब अझै दुई वटा परिक्षण उडान गर्नेछ । यसपछि बल्ल अर्को सालदेखिको यात्रामा यात्रुलाई कति रकम तिराउने भन्ने तय हुनेछ । अमेजनका मालिक जेफ बेजोस भने ८० किलोमिटरभन्दा अझै माथि लैजाने तयारीमा छन् । उनको ब्लु ओरिजिन नामक अन्तरिक्षयात्रा गराउने कम्पनी छ । ब्लु ओरिजिनले भने आफ्नो यात्राको दाम तोकिसकेको छ । एक यात्रा बराबर अढाई लाख डलर खर्च हुने उसले बताइसकेको छ ।
यस्तो यात्रा भने अन्य कुराको तुलनामा सानो अंश मात्र हुनेछ । ब्लु ओरिजिनले मान्छेलाई मज्जा दिलाएर पैसा कमाउन भने खोजेको होइन । बरु यो व्यवसायबाट यस्ता कम्पनीले अमेरिकी वा संसारका अन्य सरकारहरुसँग सैन्य सम्झौता गराउने एउटा दीर्घकालीन कमाईको बाटो बनाउन खोजिरहेका छन् । परिक्षण गर्दै जाँदा यस्ता कम्पनीले ठूला रकेट बनाउने, रकेट इन्जिन तथा रकेट विमान बनाउँदै अमेरिकी सरकारको नासासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी यिनको छ ।
यिनको लक्ष्य पृथ्वीबाट मानिसलाई चन्द्रमामा पुर्याउने रहेको छ । यसका लागि इलन मस्कको कम्पनी स्पेस एक्सले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रकेटहरु बनाइरहेको छ । यस किसिमको रकेट यदि चन्द्रमा पुग्न सक्यो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढीले खर्च कटौती हुनेछ । यस्तो हुन सकेमा भविष्यमा चन्द्रमा यात्रा सोचेभन्दा सस्तो हुने देखिन्छ ।
इलन मस्कको रणनीति के हो ?
जेफ बेजोस र रिचर्ड ब्रान्सन अन्तरिक्ष पर्यटन र सैन्य ठेक्कापट्टाबाट कमाउने रणनीति बनाउँदै गर्दा इलन मस्कले भने अन्तरिक्ष एकाधिकारका पक्षमा काम गरिरहेको केहीको धारणा छ । मस्कले अमेरिकी सरकारसँग मिलेर यस्तो अनुसन्धान गरिरहेका छन्, जसले सबैलाई अन्तरिक्षको प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउने छन् । यसका लागि नासाका ठूला वैज्ञानिकहरु यस किसिमको परिक्षणमा संलग्न भइरहेका छन् ।
यदि यो परिक्षण सफल भयो भने स्पेस एक्स कम्पनी माइक्रोसफ्ट या एप्पल कम्पनीले बनाएको विन्डोज वा आइओएसजस्तो प्लेटफर्म हुनेछ । जसमा त्यो प्लेटफर्मको सहयोगले अन्तरिक्षमा इँट्टा थप्न सक्छन् । भनाइको अर्थ, मस्कको कम्पनीले बनाएको बाटोमा हरकोहीले गाडी दौडाउन सक्छ र त्यो दौडाउने बाटो चाहिँ अन्तरिक्ष र चन्द्रमासँग सम्बन्धित हुनेछ ।
मस्कको योजना सफल भयो भने एक समयमा मानिसले मंगल ग्रहमा बास बस्नेछ । त्यो चाहिँ भविष्यको कुरा भयो अहिलेलाई भने उनी वास्तविक अवसर के हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छन् ।
कति ठूलो छ अन्तरिक्ष पर्यटन ?
मोर्गन स्टानली नामक बैंकको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०४० सम्म अन्तरिक्ष यात्राबाट कम्पनीहरुले एक ट्रिलियन डलर वार्षिक रुपमा कमाउन सक्छन् । सन् २०२० मा यो बजेट ३५० बिलियन डलर रहेको छ । बैंक अफ अमेरिकाले भने यो क्षेत्रले २०४० सम्म २.७ ट्रिलियन डलर बराबरको बजार बनाउने छ ।
यत्तिको सम्भावना भएपछि कुस्त पैसा हुनेहरु यसतर्फ लगानी गर्न आकर्षित भइरहेका छन् । एक वर्षयता मात्र यस क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी लगानी थपिएको छ । भनाइको अर्थ यस्ता कम्पनीले तीन महिना यता ८.७ अर्ब डलर लगानी जुटाइसकेको छ । स्पेस एक्स र वन वेबले मात्र ४.२ बिलियन डलर रकम उठाएका छन् । वन वेब चाहिँ इलन मस्कको कम्पनी हो, जसले ससाना सेटेलाइटहरु बनाएर पृथ्वीको कक्षमा उडाउने गर्छ । वन वेबका कारण अब संसारभरिको इन्टरनेट सस्तो र अझ सशक्त हुनेछ । केही समयपछि इन्टरनेटको माग अझ बढी हुनेछ किनभने ड्रोन र उड्ने ट्याक्सीको जमाना पनि आउँदैछ ।
यस किसिमको कार्यले अबका दिनमा अन्तरिक्षसम्बन्धी ससाना कम्पनीहरुको स्थापना बढ्नेछन् । ती कम्पनीलाई सहयोग गर्न भनेर केही लगानीकर्ताले संस्था पनि स्थापना गरिसकोक छन् । तिनको मूल्य यतिबेला कौडीको भए पनि भविष्यमा ती खर्ब कम्पनी हुनेछन् । एक समय जसरी इन्टरनेट कम्पनी साना थिए, त्यसैगरी अन्तरिक्ष कम्पनी पनि आजका दिनमा साना हुनेछन् तर तिनमाथि गरिएका ससाना लगानी पनि भविष्यमा एकै झमटमा खर्ब डलरका कम्पनी हुने आशामा धेरैले तीमाथि लगानी गरिरहेका छन् ।
यतिबेला अन्तरिक्ष व्यापारका लागि खुला भएको छ र त्यो खर्बपतिका लागि मात्र होइन, राम्रो सोच भएका कंगालका लागि पनि यो उत्तिकै अवसरका रुपमा अगाडि आएको छ । अन्तरिक्ष अहिले कति कामलाग्दो भएको छ भने पृथ्वीको कक्षमा घुमिरहेका सेटलाइटहरुले पृथ्वीमा आउने आँधीहुरीदेखि लिएर विभिन्न किसिमका मौसम पूर्वानुमान गरिरहेका छन् । एक दशकअघिको तुलनामा अहिले प्रविधि यति सशक्त भएको छ कि पृथ्वीमा घट्ने आँधीहुरी तथा अन्य मौसमसम्बन्धी जानकारी लगभग ९० प्रतिशत सही साबित हुन थालेको छ ।
त्यसैले अन्तरिक्ष भन्नाले आकाशे खेती मात्र नभई पृथ्वीका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण साबित हुन थालेको छ । त्यसैले पनि लगानीकर्ताहरुले यस विज्ञानलाई यतिबेला अझ बढी महत्त्व दिन थालेका छन् ।
अहिले आएर आकाशमा गरिने भौतिक निर्माणजस्ता कुरा मात्र अन्तरिक्षमा पर्दैनन्, अहिले आकाशमा पठाएका सेटेलाइटले पठाउने डेटाहरु पनि ठूलो महत्त्वको विषय बन्न पुगेका छन् । जोसँग अन्तरिक्षका कुस्त डेटा छन्, सानै कम्पनी भए पनि त्यो मूल्यवान् कम्पनी बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
त्यसैले रिचर्ड ब्रान्सन, जेफ बेजोस तथा इलन मस्कको यो अन्तरिक्ष यात्रा हेर्दा अन्तरिक्षको यात्रा मात्रै देखिए पनि त्यो पृथ्वीका कयौँ समस्या समाधान गर्ने बाटो पनि हुनसक्ने तर्फ धेरैजना आशावादी देखिएका छन् ।
बेलायत मुख्यालय भएको द इकोनमिस्ट म्यागेजिन एउटा साप्ताहिक खबर पत्रिका हो । यसले संसारभरिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक खबरहरू विश्लेषणात्मक तरिकाले पस्कने गर्छ । डेढ सय वर्षको इतिहास रहेको यो म्यागेजिन संसारका सबैजसो प्रमुख देश तथा राजधानीमा पुग्ने गर्छ ।
२ श्रावण २०७८ ००:०१
चीनको पुस्तक बजार १५ बिलियन डलर
सोचको कीडा: जर्म थिअरी पत्ता लगाउन किन ढिला भयो ?
रेम्ब्रान्टको जन्मजयन्तीमा सुन्दर कृतिको अवलोकन